Ana m ahapu nnukwu oru ma no na Social Media | Martech Zone
M na-ahapụrụ oké ọrụ na-aga n'ihi na Social Media
Afọ gara aga nke m ji Okporo ụzọ abụrụla ezigbo ihe ịnyagharị. Companylọ ọrụ ahụ na-eto eto nke ukwuu ma na-aga nke ọma!
Anyị meriri Onyinye Techpoint Mira.
Anyị mechara mmepe nke 4 naa njikọ - Micros, POSitouch, Comtrex na Aloha.
Anyị megharịrị interface njirimara iji bulie mgbanwe maka ndị ahịa anyị. Anyị gbakwunyere redundancy na atụmatụ nche na ngwa ahụ.
Ọbụna anyị tụbara na saịtị ebe a na-ere nri maka ọtụtụ igwe agbụ anyị.
Friday bụ ụbọchị ikpeazụ m na Okporo ụzọ. O siri ike ịhapụ ụlọ ọrụ nke m wụsara obi m na mkpụrụ obi m na nke nwere nkwado ego nke ụfọdụ kachasị ihe ịga nke ọma Internet ụlọ ọrụ in Indianapolis.
Na Leahapụ Patronpath
Enweghị m obi abụọ ọ bụla na m hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ n'ụdị dị ukwuu. Naanị ihe m na-eche bụ ma ndị na-achụ ego ọfụma na-agagharị. Otu isi ihe mere m ji gaa Patronpath bụ ịmara otu ndị na-etinye ego ha - nke ụfọdụ n'ime ndị ọchụnta ego Internetntanetị kachasị mma na mpaghara ahụ nwere. Ihe ikpeazụ m chọrọ ime bụ ịhapụ ha mgbe ọtụtụ ihe ịga nke ọma. Aga m aga n'ihu na-enye ndụmọdụ ma na-enyere Patronpath aka oge ọ bụla ha chọrọ m, iji hụ na ọpụpụ m emetụtaghị ihe ịga nke ọma ha.
Uto na nsonaazụ ya bụ isi ihe dị na Patronpath. Enwere m ohere isoro ụfọdụ ndị ịtụnanya rụọ ọrụ. Anyị rụrụ ụfọdụ ọrụ ebube na afọ gara aga na obere ego. Enwere m afọ ojuju maka ihe anyị rụzuru.
Na-arụ ọrụ na ndị klas ụwa
N'ime ọnwa isii gara aga ma ọ bụ karịa, enwere m obi ụtọ iso Marty Bird na-arụ ọrụ - onye m maara site na mmalite oge m Kpọmkwem Ngwaọrụ ma enwebeghị ohere iji rụọ ọrụ ozugbo. Marty bu ihe ahia di egwu nke nwere ikike maka iwulite mmemme ahia nke uwa site na ncha.
Marty batara na Patronpath iji chee mmemme email mba ọhụrụ nke anyị bịanyere aka n'akwụkwọ maka otu ijeri ijeri dollar. N'ime ụbọchị 2, ọ malitere ọrụ ahụ. N'ime izu ole na ole, ọ wuru usoro ihe omume na usoro ihe omume ahụ. Ugbu a, mmemme ahụ na-aga n'ihu na-eto ma na-ama ifuru n'okpuru nduzi ya. Lee ezigbo mmadụ! Eziokwu a ma ama, Marty bụkwa ezigbo onye ọrụ ụgbọ ala na a agụụ maka Audi TT.
Ndị otu ndị otu ahụ dịkwa mma. Mark Gallo na Chad Hankinson dị egwu iji rụọ ọrụ ma na-arụ ọrụ na nke onwe. Ha abụọ bụ ezigbo Ndị Kraịst nyeere m aka ịdụ m ọdụ n’oge ụfọdụ. Ekelere m ha abụọ ụgwọ. Ha nwekwara otu Njikwa Akaụntụ Ndị na-agbasi mbọ ike inyere ndị ahịa ha aka ịga nke ọma. Mụ na Tammy Heath na-arụ ọrụ maka ọtụtụ afọ ma ọ dị ịtụnanya, na-agbagharị ọtụtụ ndị ahịa kwa awa ma nwee ike ịmịpụta.
N'akụkụ siri ike nke afọ a bụ ọchịchọ nke ọrụ ahụ na otu o si dọta uche m. Nke a blog ahụhụ dị ka mere uche m nwee ike inye ụfọdụ nke m PITA oru ngo. Bụ na oku kpọpụtara m pụọ na mmemme ịkparịta ụka n'regionalntanet, kwa. Oge ndị a na-adịghị ahụkebe m gosipụtara, ndị mmadụ nọ na-ama jijiji!
Drivegbọala si n'akụkụ ugwu nke Indy bụ ihe m masịrị na mbụ, mana ka ọnụahịa gas rịrị elu na nwa m nwanyị chọrọ m ụlọ karịa, awa ole na ole kwa ụbọchị n'okporo ụzọ malitere imerụ ezigbo ahụ. Enwere m ekele maka nwa m nwoke - mgbe na-agbagharị zuru ibu na IUPUI yana nkuzi na nzuzo na Math Assistance Center, ọ ka chọtara oge iji were Katie gaa na ihe omume wee nye ya nri. Enwere m ekele maka ụmụaka m na-enweghị atụ!
Isi na Compendium Blogware
Ya mere… mgbe Chris Baggott kpọrọ site Compendium Blogware wee sị na enwere ike ịnwe ohere isoro ha rụọ ọrụ, enwere m obi ụtọ! Ngwakọta malitere mụ na Chris na-arụ ọrụ na ngwụsị izu na 2006.
Anọ m na ExactTarget na Ali Sales bịara n'ụgbọ. Ndi ndu Ali na oke ochicho nke Chris emeela ka ulo oru a di ihe di egwu Platformlọ ọrụ ịde blọgụ. Enwere m mmekọrịta chiri anya na ụlọ ọrụ ahụ na afọ gara aga wee zie ozi ọma n'elu ikpo okwu. Anyị webatara ụlọ ọrụ iwu Bose McKinney ihe dị ka otu ọnwa gara aga, ha ekwuola na ha na-ekwuputa ọmarịcha njin ọchụchọ.
Na Mọnde, m na-arụ ọrụ dị ka Vice President of Blogging Evangelism na Compendium. Aga m na-akọrọ Ali ma na-enyere ndị otu anyị niile aka na ndị ahịa ka ha kụzie ihe, kwusaa ozi ọma, rụọ ọrụ, tinye ọnụ, wdg. Ọrụ m bụ inyere ndị ahịa aka ịmalite ngwa ngwa ma nyere ha aka ịkwalite ikpo okwu ahụ iji bulie mmetụta ya n'oge niile. ahia mgbali. Nke ahụ bụ ọnọdụ siri ike ịjụ inye m ọrụ m afọ ole na ole gara aga. Aga m arụkwa ọrụ na Circle in Indy ọzọ, yabụ ejiri m n’aka na m ga-agbaba ọtụtụ ndị ọrụ ibe m ochie!
Iche na ihe niile bidoro Pat Coyle na m na-agụ Mkparịta ụka gba ọtọ a afọ ole na ole gara aga bụ ezigbo ịtụnanya.
Na nke ahụ, m ji ụgwọ ekele Robert Scoble na Chebe Israel maka ide akwukwo nke mere ka m bido blog nke m ma gbanwee uzo m choro iburu n'uwa ahia! Na m na-ewere ọnọdụ na Social Media n'oge otu n'ime nsogbu ọdịda akụ na ụba kachasị njọ na akụkọ ntolite nke mba ahụ na-ekwu ike nke onye na-ajụ ase, ọ bụghị ya?
Nchịkọta Ahịa Ahịa 101: Gosi M Ego ahụ!
Ihe 1,500! Na Social Media ationchị!
Ọkt 4, 2008 na 5:10 PM
Ekele Doug! Na-atụ anya ịnụ ihe niile gbasara ọrụ ọhụrụ ahụ!
Kachasị mma site n'ofe ọdọ mmiri ahụ,
Onye edemede Scott Wilder
Ọkt 4, 2008 na 5:13 PM
Nke ahụ bụ akụkọ dị egwu Mazi VP, nna anyị ukwu, onye ukwu gị!
Chineke gwara gị na ezinụlọ gị.
Enweghi ike ime na nwoke mara mma!
Ọkt 4, 2008 na 5:31 PM
Ozi oma, Doug! Ọ dị mma ịgụ nkọwa na akụkọ ihe mere eme na mkpebi gị.
Ọkt 4, 2008 na 5:33 PM
Ekele Doug. Ezigbo akụkọ na ekele maka ịkekọrịta akụkọ gị.
Ọkt 4, 2008 na 5:49 PM
Nabata na mgbasa ozi mmekọrịta! Nwoke, M HEkwara ya n'anya !! M na-eri, na-eku ume ma hie ihe a !! Ihe kachasị mma nye gị !!
Ọkt 4, 2008 na 6:08 PM
Debe anyị na ihe ịga nke ọma gị! Obi dị m ụtọ ịhụ ihe ị ga-eweta na ụdị ụlọ ọrụ dị ịtụnanya!
Ọkt 4, 2008 na 6:23 PM
Doug - chei! daalụ maka okwu ọma ahụ. Egwuregwu, agụụ na ịnụ ọkụ n'obi gị ga-enyere gị aka nke ọma na Compendium - ekele. Onyinye gị dị mkpa nye Patronpath kere ntọala nke anyị ga-anọgide na-ewukwasị n'elu. Aga m atụ uche ọnụnọ gị n'ọfịs, omume ịdị umeala n'obi gị, nzuzu gị na egwu (!) Na ọchị ọchị. Followinggbaso gị na Twitter naanị agaghị edochi oke mkparịta ụka mkparịta ụka nke ehihie anyị nwere! Na-elekọta Doug.
Ọkt 5, 2008 na 1:07 AM
CHAỊ!! Nke ahụ dị egwu! Amaara m na ị ga-eme nke ọma – ọ bụ agụụ gị!
Ọkt 5, 2008 na 7:26 AM
Ezi azụmahịa Doug!
Echetara m na ị kọọrọ m ntinye aka gị na Compendium na echere m na nke ahụ ga-abụ nnukwu ikpo okwu maka gị!
Ọ dị mma ịnụ na-emecha mechaa!
Ọkt 5, 2008 na 9:58 AM
Na-ada ka nke zuru oke dabara na gị. Enwere m obi ụtọ n'ọrụ ị na-arụ n'oge oge gị na blọọgụ a. Ọ ga-atọ gị ụtọ ịhụ ka ọ dị mgbe ọ na-elebara gị anya.
Ọkt 5, 2008 na 6:13 PM
Are na-aga ime nnukwu ihe na Compendium!
Curt Franke kwuru
Ọkt 6, 2008 na 12:28 AM
Ekele dịrị gị, Doug. Ekwenyesiri m ike na ị ga-eme nnukwu egwu ọhụụ ma hụ aha ọhụụ n'anya! (Ọ na-ewepu ihe ị na-eme.)
Ọkt 6, 2008 na 5:08 AM
Emechara nke ọma, Doug!
Ọkt 7, 2008 na 2:59 PM
Congrats Doug, ka hụtara akụkọ taa! Udo kacha mma na ọrụ ọhụụ gị, ụda dị ka gị na Compendium zuru oke.
Mee 30, 2011 na 8: 15 AM
CHAỊ!! Is ga-eme nnukwu ihe na Compendium!